GoDaddy na-azọrọ mmebi iwu ụghalaahịa maka ngalaba Go-Daddy zụrụ na GoDaddy | Martech Zone
GoDaddy na-azọrọ mmebi iwu akara ụgha maka Go-Daddy ngalaba azụrụ na GoDaddy
Fraịde, Ọgọstụ 24, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Taa anatara m oku site na ụmụ amaala ndị na-eche maka mmekọrịta m na NoDaddy.com, saịtị nke na-egbu GoDaddy maka azụmahịa ya.
Mgbe m mechara gwa John okwu, ihe na-eme ya juru m anya. John zụtara GO-DADDY-DOMAINS.COM na GO-DADDY-DOMAIN.COM site na… ndị ọzọ… GoDaddy.com. Amaghị m ma ọ tụrụ John n'anya ma ọ bụ na ọ juru ya anya na ọ nwere ike ịzụta ngalaba ahụ, mana m bụ!
Ọ bụrụ na ị na-eche ma ọ bụrụ na John bụ onye squatter ma ọ bụ na-anwa iji GoDaddy, ekwenyeghị m ya. Ọ maara na enwere ohere ịzụrụ ngalaba, mana echeghị m na ebumnuche ya dị njọ. N'ikwu okwu na John na ekwentị, enwere m mmetụta na ọ maghị ụlọ ọrụ a n'ime na n'èzí, ọ hụrụ ohere wee wụkwasị ya.
Nke a bụ ebe ọ na-adọrọ mmasị:
si: Mmebi iwu
Zigara: Tuesday, August 21, 2007 1:08:25 PM
Isiokwu: GO-DADDY-DOMAINS.COM na GO-DADDY-DOMAIN.COM ringgha ụghalaahịa
Ọ bịakwute anyị na ngalaba aha abụọ ị debanyere aha na-emebi otu ma ọ bụ karịa nke GoDaddy.com ụghalaahịa.
Dịka ị nwere ike ịma, GoDaddy.com bụ ụghalaahia edenyere nke GoDaddy.com. Anyị na-ede dị ka nkwanye ugwu iji gwa gị na ojiji ị na-eji okwu ahụ bụ "Go Daddy" na ngalaba aha gị ma ọ bụ aha ngalaba aha nke bụ otu ihe ma ọ bụ nke yiri nke "Go Daddy" nwere ike ibute ọgba aghara na ahịa ma ya mere enwere ike ịkọwa ya dị ka mmebi nke ụghalaahịa GoDaddy.com.
N'ihi ya, anyị ga-achọ ịkwụghachi gị maka ịzụrụ ngalaba ndị a ma mee ka ngalaba ahụ banye na akaụntụ anyị.
Biko dị obiọma ka ibido mgbanwe nke akaụntụ na adreesị ozi-e a n'ime ụbọchị 10. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara usoro a, biko kpọtụrụ m site na ịza email a.
Yabụ GoDaddy ugbu a, onye resịrị ngalaba ahụ John, na-esozi John maka mmebi iwu ụghalaahịa?! Cheedị nke ahụ!? Enwere m ike ịghọta ma ọ bụrụ na John zụrụ ngalaba ahụ site na a osompi… Mana GoDaddy resịrị ya !!! Ọ dị ka ijegharị na Starbucks, jiri iko kọfị na-apụ ma na-egwu egwu Starbucks maka ịnwe kọfị ahụ.
Ihere na GoDaddy. Ọ bụ ihe nzuzu na ha emebeghị ihe ndị dị mkpa iji a) debanye aha ngalaba ndị ọzọ ma ọ bụ b) ma ọ dịkarịa ala tinye ngọngọ na ọrụ ha ka ha wee ghara ire ya n'onwe ha. Ekwenyesiri m ike na GoDaddy anaghị ere ahịa naanị, ha na-agba ọsọ site na ara kwa.
Ọ bụrụ na ị maara ezigbo ọka iwu nke nwere ike inyere John aka, biko kwuo okwu na blog a na ụfọdụ ozi kọntaktị. John ga-agụ ihe ndị a kwuru.
Tags: nwebisiinkadomainlaa-nnagodaddyimebi iwunodaddyedenyere
Agha Nchọgharị: Internet Explorer na-aga n'ihu na-efunahụ Firefox, Kedu ihe bụ Safari?
Ahịa Ahịa Agbanwe Agbanwe - Ọ bụghị Ọchịchị 40/40/20
Aug 25, 2007 na 12: 31 AM
Kedu ihe ị masịrị Dotster ụbọchị ndị a?
Aug 25, 2007 na 10: 31 AM
Echere m mgbe niile Dotster bụ onye na - edeba aha ngalaba ka mma - ngwa ọrụ dị mma karịa GoDaddy. Ekwenyere m na GoDaddy meriri na mgbasa ozi nke azụmahịa, n'agbanyeghị.
Imirikiti mmadụ na-eche na ngwa niile dị otu rue onye na-enyocha nkwekọrịta onye ọrụ. Dotster agaghị egbochi akaụntụ gị ọ gwụla ma a manyere ha iwu.
Sep 12, 2007 na 10:21 PM
Dotster kpọnwụrụ ngalaba m godaddysgirls.com ma ugbu a, WIPO na-achịkwa ya ruo mgbe ọ ghasịrị. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike inyere m aka ka m mara.
Aug 25, 2007 na 10: 52 AM
Aghọtaghị m ihe kpatara ndị mmadụ ji atụkwasị GoDaddy obi
Dec 31, 2008 na 1:06 PM
Achọpụtara m ụfọdụ aha ngalaba aha ọma ma hapụ ya ka m zụta mgbe e mechara ma Go dad jidere na registererd n'okpuru aha ha.
Thsi bụ izu ohi ụbọchị. John adala mba !!
Aug 26, 2007 na 9:11 PM
Amaghị m onye ọka iwu ọ bụla, mana amaara m blọọgụ abụọ nwere ike ịmasị akụkọ ahụ
Ha nwere ike ịma ụfọdụ iwu iwu iji nyere aka.
(Amaghị m ihe niile banyere GoDaddy - nke ahụ bụ ebe m na-azụta ngalaba m niile !!! Grrr)
Aug 26, 2007 na 9:30 PM
Daalụ maka njikọ ndị ahụ Nathania! Enyefere m akụkọ ahụ na saịtị abụọ ahụ. Banyere akaụntụ GoDaddy gị, ị nwere ike ichere oge niile ruo mgbe ha ga-agwụ ma nyefee ha. Dotster na-enwekarị nnyefe ego.
Enwere m ekele maka eziokwu na ha bụ naanị ngalaba na-edeba aha na chọrọ akwukwo ederede tupu ha emee onye ọ bụla ihe.
Aug 26, 2007 na 10:35 PM
Daalụ maka pointer na ngalaba Aha News Nathania. O juru m anya na Godaddy abịabeghị na NoDaddy.com.
Godaddy nwekwara n'ezie na TOS ha ihe maka mmetụta nke onye nwe ngalaba ahụ ga-akwụ ụgwọ maka usoro iwu ọ bụla (dị ka UDRP) nke a na-eweta site na godaddy. Ya mere, echere m na nwoke a ga-akwụ ụgwọ maka nke ahụ? Ma ọ bụ ebe ọ bụ na edozi ya site na godaddy n'ime, ma eleghị anya, ha gafere ụgwọ ndị ahụ. 🙂
Ihe a niile yiri ka ọ bụ ihe na-adịghị njọ. Otu nwoke na-emehie ihe. Godaddy na-ezigara ya ozi ma gwa ya ya ma nye ya nkwụghachi ya ego ya. Ọ kwesịrị iweghachi ego ahụ wee pụọ. Ọ dịghị nsogbu. Enweghị Nsogbu. N'ezie dịka m 2cents na nke a. O kwesịrị iwere onyinye ya ka ọ bụrụ ihe ngọzi. . . ugbu a ọ nwere ike ịga debanye aha ụfọdụ ka mma.
Ikwu okwu nke godaddy na dotster. Frank (onye nke m nke abụọ na iwu na ngalaba aha aha) dere mpempe a nke na-enye ụfọdụ ụlọ ọrụ ọkụ.
N'ikpeazụ, maka ndị ọka iwu (ọ bụrụ na ọ dị mkpa inye nsogbu. .Nke echeghị m na ọ bara uru iji oge ya mee ihe). O nwere ike ilegara John Berryhill (johnberryhill.com) ma ọ bụ Ari Goldberger (esqwire.com) ma ọ bụ Paul Keating (renovaltd.com) n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ n ’ị gbanwere aha ha na google, ị ga - ahụ ozi ndị ọzọ na ihe ịga nke ọma ha na - ejikwa. Echere m na ha ga-ekwu ihe yiri nke m dụrụ ọdụ. Nyeghachi aha ndị ahụ. Nweta ego gị. Bugharịa na ịzụta ole na ole ka mma aha na a dị iche iche na-edeba aha 😉
Aug 27, 2007 na 5: 52 AM
Daalụ maka iwepụta oge na ide nzaghachi dị egwu!
Nov 1, 2007 na 1:34 PM
Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ. Enwere m rackdaddy.com na rackdaddy.net kemgbe 2001. ha abụọ debara aha ha na onye na-edeba aha ọzọ, ọ bụghị GoDaddy.Com. Edere m aha na mmalite afọ a maka mmemme mgbakwunye GoDaddy.Com na ngalaba abụọ ahụ na-agagharị na sava ha. Na-eme GoDaddy.Com onye ọchụnta ego m na atụmatụ a.
Taa, enwetara m ụdị email site na GoDaddy.Com na ihe ndị a na ahụ:
Anyị na-achọ ugbu a ka ị kwusi: kwụsị ma kwụsị ojiji ị na-ejighi ikike nke ngalaba ndị a, kagbuo ebugharị nke ngalaba aha ndị a; ma nyefee ngalaba aha na GoDaddy.com site na November 16, 2007.
M na-eche ihe ụghalaahịa ha ga-ezo aka, ebe m nwere obi abụọ na ha agaghị enwe akara ụghalaahịa na okwu ahụ? Ọ bụrụ otú ahụ, ụmụaka ọ bụla kwesịrị ichekwa ego mmachi akpa ha iji kwụọ ụgwọ ikike ha nwere ikwu?
Ndụ dị mma
Aug 27, 2007 na 1:44 PM
Nke a bụ oke ọchị na ileba anya mbụ. Mana ọ bụrụ n'ịchọpụta nke a nke ọma, ee, godaddy mere nke ọma. Ebumnuche John abụghị n'ezie ịmalite ihe na-abụghị banyere Godaddy na ngalaba aha a. Ọ dị mma ịghara ịbanye na nsogbu iwu kama ịghaghachi ego ma debanye aha ngalaba ọzọ, wee mechaa ya.
Aug 27, 2007 na 12:52 PM
Ha na-ekwu: “anyị ga-achọ ịkwụghachi gị maka ịzụrụ ngalaba ndị a ma bugharịa ngalaba na akaụntụ anyị.” O yiri ka ha na-ekwu na ha chọrọ ma ngalaba aha laghachi. Ma eleghị anya, ọ bụ ọrụ nchịkwa na ha ekwesịghị ire ha ka ha malite ma ugbu a, ha na-eweta akwara iwu yana nkwụghachi iji weghachi ha.
Ọ dị ka enweghị ọrụ karịa ebumnuche ọjọọ.
Ihe omume mbụ bụ ịchọpụta ma ọ bụrụ na "Go Daddy" bụ, n'ezie, ụghalaahịa edenyere aha na ọ bụghị naanị nkwenye nke ikikere ụghalaahia.
Nke abuo, njikọ GoDaddy.com na ibe ọ bụla a na-ekwu na ọ ga-eweda iwe ga-ebelata nsogbu ọ bụla 'mgbagwoju anya' metụtara nzacha ngalaba na-ada ụda.
Eziokwu ahụ bụ na ngalaba ndị mejọrọ, n'ezie, GoDaddy rere ya ga-enwe nnukwu ibu maka John. John nwere nkwekọrịta ya na GoDaddy onye, ​​ọ dị ka ọ hapụrụ ikike ha iji kwupụta okwu mmebi iwu ọ bụla n'ihi na ha rere (nkwekọrịta ahịa) ngalaba aha John.
Ntụziaka m bụ ịtụle ire ngalaba ndị mejọrọ laghachi na GoDaddy.com maka $ 25,000 nke ọ bụla.
Aug 27, 2007 na 4:02 PM
E nwere ụghalaahịa atọ maka godaddy.com, 3 maka laa nna, yana 3 maka ịga nro papa ya. Legharịa anya na saịtị USPTO.Gov. Hụ ka ụghalaahịa ahụ kpuchitere ngalaba dịka ọrụ, aga m eche na iji ojiji ngalaba GO-DADDY-DOMAINS.COM na GO-DADDY-DOMAIN.COM ga-emebi akara ha.
Ọzọkwa, John nwere nkwekọrịta n'ezie na godaddy yana na nkwekọrịta ahụ ọ kwenyere, ọ na-ekwu (n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ)
“Go papa m nwere ikike ịjụ, ịkagbu ma ọ bụ nyefee ndebanye aha ọ bụla ọ hụrụ na ọ dị mkpa, na ezi uche ya, iji kpuchido iguzosi ike n’ezi ihe na nkwụsi ike nke ndekọ, ịgbaso iwu ọ bụla, iwu gọọmentị ma ọ bụ ihe achọrọ, arịrịọ nke ndị mmanye iwu , na-agbaso usoro mkpebi esemokwu ọ bụla, ma ọ bụ iji zere ibu ọrụ ọ bụla, obodo ma ọ bụ omempụ, n'aka Go Daddy, yana ndị mmekọ ya, ndị enyemaka, ndị isi ọrụ, ndị isi na ndị ọrụ. Go Papa nwekwara ikike ịkacha ngalaba aha n'oge mkpezi nke esemokwu. ”
“Go Daddy nwere ikike ịkwụ ụgwọ ọrụ ezi uche dị na ya maka ọrụ nchịkwa na-abụghị nke ọrụ ndị ọ na-arụ mgbe niile. Ndị a gụnyere, mana ọnweghị oke, nsogbu ndị ahịa na-enweghị ike ijikwa email ma chọọ ọrụ nkeonwe, yana esemokwu chọrọ ọrụ iwu. A ga-akwụ ụgwọ ụgwọ ndị a na Usoro Paykwụ wegwọ anyị nwere na faịlụ maka Gị. Nwere ike ịgbanwe Paykwụ Metgwọ Method n'oge ọ bụla site na-egbu osisi n'ime Akaụntụ Gị Manager. ”
Enwere ike ịhụ ihe niile mgbe ị gụrụ nkwekọrịta ahụ n'oge ndebanye aha (na ọ nweghị onye na-agụ nke pụtara) ma ọ bụ na njikọ dị n'okpuru
Ndụmọdụ ịtụle ịre ngalaba ndị a ka godaddy bụ ndụmọdụ ọjọọ. Were nkwụghachi ego na-aga n'ihu. Emehiere. Ihe mmuta. Godaddy mụtara ihe na nke a kwa.
Aug 27, 2007 na 8:51 PM
Akpọrọ m godaddy asị. Ha weghaara ngalaba m n'ihi na mmadụ na-etinye ụfọdụ foto eserese mana ọbụlagodi datacenter m ekwughi ihe ọbụla, mana godaddy. Ọ bụrụ na ị debanyere aha na godaddy, ha nwere ngalaba gị. Ha na-ana $ 75 ịhapụ gị… omume azụmahịa ha adịghị mma ma na-eji ike ha eme ihe n’ụzọ na-ezighị ezi.
Aug 28, 2007 na 2: 12 AM
Nke a abụghị akụkọ ma ọlị, ọ dị mma ikwu eziokwu godaddy kwesịrị ịzụta ngalaba. eziokwu ahụ bụ na e rere ya site na godaddy, n'agbanyeghị na onye ọ bụla na-edeba aha nwere ike ree ngalaba ọ bụla bụ eziokwu nzuzu n'aka gị.
ọ bụrụ na ha nye ịda iwu nke nwebisiinka mgbe ahụ ha na-eme ya na ntọala ziri ezi. amaara m nke ọma na ọ gaghị eweta akwalite uwe elu ya, ọ maara ịzụ ngalaba ahụ.
Sep 12, 2007 na 10:12 PM
GoDaddy na-anwa ịnara ngalaba m godaddysgirls.com n'aka m. Achọrọ m mgbu gị.
Gaa na ngalaba NODADDY.com maka enyemaka.
Jun 22, 2008 na 3: 16 PM
GoDaddy abụwo ezigbo onye ọchụnta ego azụmaahịa ọtụtụ afọ.
Jenụwarị 6, 2009 na 9:30 PM
Ndo umu nwoke. Ọ bụ kpochapụwo cybersquatting. Enweghị ihe ọ bụla achọrọ - ma n'ezie ọ gaghị ekwe omume- ijide typo, mgbanwe na ndọtị maka ụghalaahịa gị niile. Ndebanye aha nchebe nwere ike ịbụ ezigbo echiche maka ụfọdụ ndị doro anya, mana achọrọghị ya. Na Anti-Cybersquatting Act na-eme ka ihe ruru $ 100,000 + maka ndebanye aha na akara ụghalaahịa. Lelee ihe ndị a maka ozi ndị ọzọ:
Cybersquatting & Ngalaba Trademark Blog
Jun 27, 2009 na 7:14 AM
Ihe omuma nke Godaddy di nma.ma m na-eji Godaddy Reseer Site http://www.tucktail.com/ N'ihi na My Business ngalaba aha Ndebanye aha & Maintanance Usoro ..